कुनै कुरा एक व्यक्ति हुन सक्छ कसरी सफाइको, उहाँले सजिलै जुम्रा संक्रमित बन्न सक्छ। तपाईं आफ्नो कपाल धुन र आफूलाई unsanitary अवस्थामा राख्न एक लामो समय आवश्यक छैन, बस संक्रमित वा स्वच्छता विषयको संग सम्पर्क र जुम्रा कमाएका छन्! तिनीहरूलाई कसरी प्रदर्शन गर्न, र कसरी परजीवी को छुटकारा प्राप्त गर्न: जसले जुम्रा थियो भने एक मानिस के कुरा गर्न चाहन्छ।
विधि 1: पुनर्स्थापित
आज, धेरै विकल्पहरू छन् जुम्रा को छुटकारा गर्न। एक व्यक्ति फेला छ भने जुम्रा, कसरी प्रदर्शन गर्न तिनीहरूलाई? सबै हात गरेको। यस्तो प्रक्रिया दुई लगातार कदम छ। पहिलो - हात द्वारा जुम्रा को छुटकारा प्राप्त गर्न, अर्थात्, तपाईं बस vermin पकड गर्न आवश्यक छ। यो fleas विपरीत, जुम्रा हाम फाल्न, कि छैन, तर चाँडै चलान सम्झना गर्न लायक छ। दोस्रो चरणमा तपाईंले यी कीराहरू सौतेली गरिएको थियो अन्डा को छुटकारा प्राप्त गर्न मार्फत comb गर्न आवश्यक छ। तर, यो विधि छैन धेरै विश्वसनीय, को कीराहरूको लुगा र कपाल मा फिर्ता आउन समय मा लुकाउन सक्नुहुन्छ किनभने छ।
विधि2दवादारू
जुम्रा हामी कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम बस यो औषधि पसल मा बेचिन्छ आधुनिक विशेष उपकरण को मद्दतले गरेको छ। यसो गर्न, तपाईं सही दबाइ चयन गर्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक छ। अक्सर, प्रक्रिया निम्न छ: यो, टाउको को छाला मार्फत यो समान रूप फैलाउने, को चिकित्सा केश मा राख्न त्यसपछि प्लास्टिक झोला संग र माथि आफ्नो टाउको र्याप आवश्यक छ - एक तौलिया संग। त्यसैले यो एक जबकि र राम्ररी सबै कुल्ला लागि जस्तै छ। कि पछि, शुष्क कपाल राम्ररी ठीक दाँत संग सफा कोर्नु कंघी।
विधि3मान्छे
एक व्यक्ति जुम्रा छ भने, तिनीहरूलाई कसरी प्रदर्शन गर्न, लोक चिकित्सा बताउनुहोस्। त्यहाँ थुप्रै तरिकामा एकदम छन्। तपाईं Cranberry रस, वनस्पति तेल, चाय र infusions, केश माथि राख्यो, जो पछि छ, त्यसपछि धोए र ध्यानपूर्वक कंघी को एक किसिम RUB गर्न केही समय टाउको गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, tansy एक औषधीय जलसेक तयार, तपाईं 15 मिनेट Infuse, पानी लीटर चार चमचा फार्मेसी संग्रह उम्लिरहेको खन्याउन आवश्यक - को चिकित्सा तयार छ। र प्रभावकारी decoction तयार गर्न दुई चमचा hellebore र Rosemary न्यानो सुंगुरको बोसो को 50 ग्राम संग मिश्रित (कडाई अनुपात, यी जडीबुटी विषाक्त देखि निम्न) पर्छ।
विधि4सबै ज्ञात
एक व्यक्ति जुम्रा छ भने, तिनीहरूलाई कसरी प्रदर्शन गर्न, हाम्रो हजुरआमा शीघ्र हुनेछ। तिनीहरू केवल सिरका जस्तै उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। 1, यो आँखा सम्पर्क परहेज, उनको टाउको मनोबल घट्यो, र त्यसपछि राम्ररी र कोर्नु कुल्ला, 15 मिनेट लागि बाल र्याप त्यसपछि: चिकित्सा त गाह्रो छैन बनाउन, तपाईं सिरका सार मिश्रण पानी संग 1 को एक अनुपात मा आवश्यक छ। पाँच दिन पछि, यो कमजोरीको वशमा पऱ्यौं जोगिन गर्न प्रक्रिया बारम्बार सिफारिस गरिएको छ।
एक पनि केही सावधानीहरु लिनुपर्छ जुम्रा र लीख s को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी बाहिर आंकडा। उपचार सुरु गर्दा, वेवास्ता वा राम्ररी एक संक्रमित व्यक्तिबाट प्रयोग सबै वस्तुहरु जीवाणु रहित बनाउनु पर्छ: combs, तौलिया, टोपी, स्कार्फ, आदि यो परजीवी अन्य सदस्यहरु सबै साथ जुम्रा को हटाउनु आवश्यक जो छ कि छैन भनेर बनाएको छैन ट्रयाक गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ।
टाउको जुम्रा को समस्या सामना गर्न, तपाईंले निरन्तर बाहिर निवारक उपाय बोक्न सक्छ। यो लुगा, भर टाउको को निरीक्षण, मात्र बच्चाहरु तर पनि वयस्क बनाउन परिवर्तन गर्न, साथै पालन पर्याप्त समय राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता। पहिले नै मात्र किनभने यो गर्न सक्नुहुन्छ स्वस्थ हुन!
पित्त थैली। विभिन्न रोगहरु को लक्षण
TCD मस्तिष्क जहाजहरु। Transcranial डपलर मस्तिष्क जहाजहरु
नवजात शिशुहरु मा Intracranial दबाव
Transabdominal अल्ट्रासाउंड - यो के हो? Transabdominal pelvic अल्ट्रासाउंड
चुकंदर रस - उपलब्ध धेरै रोगहरु लागि Elixir
एसएस प्रभाग "Totenkopf"। प्रतीक एसएस Panzer प्रभाग "Totenkopf"
मलम "Redetsil": पुस्तिका, समीक्षा, analogs
बिक्री पदोन्नति - प्रभावकारी मार्केटिङ लागि उपकरण
साझा - यो के हो? फाइल स्थानान्तरण लागि संसाधन
बल मा प्रशिक्षण कार्यक्रम - सिफारिसहरू र सल्लाह को आधार
स्वचालित घुमावदार संग यांत्रिक हेर्छ - प्रतिष्ठित सहायक
रोजा एंजेला: विवरण र समीक्षा
बोलिभिया र यसको इतिहास को झण्डा